दुई हप्तामा परदेशमा कोरोनाले लियो १३ नेपालीको ज्या’न – Tufan Media News
दुई हप्तामा परदेशमा कोरोनाले लियो १३ नेपालीको ज्या’न
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:४०
कारोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण दुई साताको अवधिमा विदेशमा थप १३ जना नेपालीको मृ’त्यु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार साउदी अरबमा ७ जना, भारतमा ५, कतारमा १ जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारणले ज्या’न गएको हो ।संघले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार भारत सहित विश्वभर २८ मुलुकमा रहेका ४ सय ३५ जना नेपालीको कोभिड १९ का कारणले मृ’त्यु भएको छ ।
समितिका संयोजक डा. संजिव सापकोटाका अनुसार सोमबार साँझसम्म विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट ९३ प्रतिशत नेपाली मुक्त भएका छन् ।
यो पनि समाचार:कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चाराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल:काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ जनावर र पशुपंक्षीले देखाउने ब्यबहार दुरुस्तै मिल्न जान्छन् । जनावर र पंक्षीले दुरुस्तै मानिसको जस्तो दृश्य देखाउँदा कस्लाई पो हाँसो उट्ठैन र ? यस्तै दृश्य अहिले ट्वीटरमा भाइरल बनिरहेको छ ।
जहाँ एउटा चराको भिडियो अहिले निकै चर्चामा छ । केवल १० सेकेण्डको यस भिडियो झट्ट हेर्दा कुल्ला गरगल गरे जसरी कुल्ला गरिरहेको देख्न सकिन्छ । भाइरल भिडियोमा चरा टाउको मास्तिर फर्काएर मानिसले कुल्ला गरे झै कुल्ला गरेको जस्तो देखिन्छ ।यो भिडियो ट्विटर प्रयोगकर्तामाझ निकै चर्चामा छ । उनीहरूले चराको समझदारीलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै बुद्धिमानी चरा समेत भन्न भ्याएका छन् । चराको यो रमाइलो दृश्य देखेर तपाईको पनि हाँसो थामिने छैन ।
यो मिति देखि दुबई–काठमाण्डौ
बहराइनले जारी गर्यो नेपालीका
विदेश हानिएको बेरोजगार युवालाई
मलेसिया बाट घर फर्कनेहरुका
साउदीमा हुनुहुन्छ? आयो यस्तो